काठमाडाैं – सरकारी कर्मचारीलाई दसैंमा भत्ता वितरण गर्न करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा हुने भएको छ। दसैं भत्ताका लागि सरकारी कर्मचारीले नियमित तलब बराबरको एक महिनाको थप तलब पाउनेछन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ शर्माले निकासा हुने यो रकम घटस्थापना अगाडि वितरण गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च अर्थ […]
पुरन शाह/धनुषा । भारतको केन्द्र सरकारका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पाइपलाइनको माध्यमले पेट्रोलियम पदार्थ भारतवाट नेपाल आउन लागेकाले दुई देशको सम्बन्ध झनै उचाइ लिने बताउनुभएको छ । धनुषाको धनुषाधाम तिर्थस्थल हुँदै जनकपुरधाम आइपुग्नुभएका मन्त्री प्रधानले नेपाली जनताको सुविधाका लागि ३ सय २२ करोडको लगानीमा भारतको मोतिहारीवाट नेपालको अमलेखगञ्ज सम्म ६९ किलो मिटर पाइपलाइनको काम अन्तिर […]
सञ्चालनमा आयो सुपथ मुल्यको पसल, कुन सामानमा कति रुपैयाँ छुट ?
समिक्षा, काठमाडौं । बिगतका बर्षहरुमा झैं सरकारले यो बर्षको सुपथ मुल्य पसल आजदेखि संचालनमा ल्याएको छ । दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरि संचानलनमा ल्याइएका यस्ता पसल कार्तिक २७ गतेसम्म संचाल हुनेछन । यसरी संचालनमा आएका सुपथ मुल्यका पसलमा खाद्य सामग्री खरिद गर्ने उपभोक्ताले प्रचलित बजार मुल्य भन्दा ५ देखि १० प्रतिशत सम्म्म छुट […]
विमामार्फत् विपद्पछि हुने आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विमामार्फत् विपद्पछि हुने आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बीमा समिति र नेपाल बीमक संघद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘वित्तीय सुदृढीकरण : विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन र बीमा’ विषयक २१आँैं सम्मेलनको आज काठमाडौमा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको भन्दै […]
काठमाडौं । दशैँका लागि लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट निष्कासन गर्ने भएको छ । असोज २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नोट साट्न खुला गरिने व्यवस्थामा एक व्यक्तिले अधिकतम २७ हजार रुपैयाँसम्म साट्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट […]
सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मनोमानी काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रमा चर्चित नाम हो डा.अरुणा उप्रेती, सुविधा सम्पन्न आबास भन्दै विज्ञापन आएपछि केहि बर्ष अघि डा. उप्रेतीले सिभिल होम्सको फेज ३ मा घर खरिद् गरिन् । तर, जब घरमा बस्न सुरु भयो बल्ल सिभिल होम्स्ले ठगेको महशुस भयो उनलाई । घर खरिद गरेको बर्षौं वितेपनि उनले न […]